Kitra – Major League Soccer (MLS): tsara fanombohana ny ekipan’i Romain Metanire | NewsMada
Nahazo isa telo avy hatrany i Romain Metanire sy ny ekipan’ny Minnesota, teo amin’ny fanombohan’ny fifanintsanana, hiadiana ny ho tompondaka “Major League Soccer” (MLS), taranja baolina kitra. Nandresy an’ny Sporting Kansas City ry zalahy.
Nahazo fandresena avy hatrany ny Minnesota United Football Club, klioba misy ilay mpilalao malagasy, i Romain Metanire, teo amin’ny andro voalohany hiadiana ny ho tompondakan’i Etazonia na ny “Major League Soccer” (MLS). Nandresy ny Sporting Kansas City, tamin’ny isa tery 2 no ho 1, ry zalahy, ho an’ny sokajy D. Fihaonana notanterahina ny alatsinainy 13 jolay lasa teo, tao amin’ny kianja ESPN Wide World of Sports Complex.
Anisan’ireo nijoro voalohany ary tompon-toerana hatramin’ny voalohany ka hatramin’ny farany i Metanire, tamin’ity fihaonana ity. Nampiseho ny fahaiza-manaony hatrany ity vodilaharan’ny Barea de Madagascar ity tamin’ny tanjaka sy ny teknika nananany. Tolotra avy any aminy mantsy ny nahatafidiran’ny Minnesota ny baolina faharoa, nandresen’ny Minnesota.
Nampiditra ny baolina voalohany ry zareo Kansas, mpampiantrano, tamin’ny alalan’i Khiry Shelton, teo amin’ny minitra faha-43. Isa nentin’ny roa tonta niala sasatra. Nifandimbiasana avy eo ny fanafihana teo amin’ny fidirana faharoa. Nahafaty baolina ny Minnesota, saingy “hors jeu” izany rehefa nojerena tamin’ny video assistance referee (Var). Nilalao 10 ny Kansas, teo amin’ny minitra faha-74, taorian’ny karatra mena azon’i Tim Melia, mpiandry tsatoby.
Efa tany amin’ny fanampim-potoana 90 mn + 1 vao nahasahala ny isa ho 1 sy 1 ny Minnesota, rehefa namono tena i Shelton. Tsy nijanona teo fa mbola niampy iray indray izany. Nahatafiditra baolina faharoa i Kevin Molino, teo amin’ny 90 mn + 6. Nahazo fandresena toy izany koa ny Real Salt Lake raha nandresy ny Colorado Rapids, tamin’ny isa 2 no ho 0. Samy manana isa telo izany izy ireo, hatreto. Ny roa tonta ireo izay hidona ny asabotsy 18 jolay, eo amin’ny andro faharoan’ity MLS ity.